वाह ! राजनीति – Loktantrapost Loktantrapost
वाह ! राजनीति
२२ बैशाख २०७८, बुधबार १२:२५
नेपाली बृहत शब्दकोश अनुसार जनता भन्नाले कुनै देशमा बस्ने मानवको समष्टि भन्ने बुझिन्छ । देश भन्नाले गाउँ, सहर मिलेर बनेको एक विशिष्ट भूभाग वा मुलुक भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै, राजनीति भन्नाले शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने, मौलिक अधिकारको कदर गर्ने, राज्यको शासन व्यवस्थाको प्रणाली निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको उपयुक्त सन्तुलन गर्ने र यस्तै अन्य कार्य गर्ने नीति भन्ने बुझिन्छ ।
राज्यको नीति, ब्यवस्थालाई ठिक गरि जनताको लागि अन्य देशप्रतिको कुटनैतिक सम्बन्धलाई ठिक राख्ने व्यवहारगत व्यवस्था नै राजनीति हो । सहज भाषामा बुझ्ने हो भने, राज्यको राज काज सञ्चालन गर्ने नीति नै राजनीति हो । मुलुक कति सफल; कति बिकसित छ भन्ने बिषय त्यो देशको राजनैतिक ब्यबस्था र राजनीतिज्ञको कुशलतामा धेरै भर पर्ने गर्छ । देशका कुनै पनि पार्टीले जनताको लागि राजनीति गरेपछि अवश्य नै त्यो सफल र सक्षम मानिन्छ ।
समाजमा भने राजनीति शब्दमा आम जनताको भिन्न भिन्न धारणा रहेको पाइन्छ । ब्याकरण वा शब्दोकोष भन्दा पनि ब्यबहारिक रुपमा भन्ने हो भने राजनीतिको दुरुपयोग हुने कार्य भएको धेरै उदाहरण हाम्रो समाजमा यत्र तत्र भेटिन्छ ।
राजनीति भन्न साथ बनाउने भन्दा भत्काउने, मिलाउने भन्दा फुटाउने, सबैको भाग लुटेर आफू मोटाउने प्रवृतिको रुपमा प्रयोग भएको पाइन्छ । धेरैले अकुद सम्पत्ति कमाउने धन्दाको रुपमा प्रयोग गरेर पनि आज नेपाली जनतामा राजनीति भन्ने शब्दमै बितृस्णा फैलिएको छ । जनतालाई राजनीतिक दलले जब वेवास्था गर्ने गर्दछन्, त्यसपछि राजनीति सदाको लागि समाप्त हुन्छ । जनताको संघर्षको प्रतिफल दिन नसकेका राजनीतिक दलको औचित्य हुँदैन ।
आफ्नो घोषित उद्देश्य र लक्षित बर्ग भन्दा पर गएर गरिएको ब्यक्ति केन्द्रित, अमर्यादित कार्यले गर्दा मानिसमा राजनीति र राजनैतिक दलप्रतिको बिश्वास घट्दै गएको भेटिन्छ । राजनिती उर्जा थप्नु पर्नेमा अझ धेरै नैराश्यता थपेको भेटिन्छ । यसको कारण भनेको एक अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति पनि हो ।
सरकारी ढुकुटीलाई आफ्नो पुर्खाको सम्पती ठानी राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाभिमान लत्याउँदै जनता भन्दा पनि ब्यक्तिगत स्वार्थको लागि पार्टीलाई सञ्चालन गदैं आईरहेका छन । राजनीतिलाई अस्वस्थ्य आर्थिक कुमल्याउने प्रतिस्पर्धाको रुपमा लिईने गरिएको छ ।
राजनिति प्रती बढ्दै गरेको बितृष्णालाई चिर्दै सकारात्मक उर्जा बोकेका युवाहरु फेरि पनि राजनीतिमा आउनु पर्ने हुन्छ । राजनीति राज्यको नीति हो । राज्य, सन्चालन गर्ने संरचना हो । राज्यको आकार र संरचना राजनीतिले नै तय गर्छ । युवामा देश देखिन्छ, बालबालिकामा बुझिन्छ । महिलाको अनुहारमा देश झल्किन्छ । वृद्धका गालामा देशका सिमाना भेटिन्छ। यस्तै–यस्तै धेरै ठाउँमा देश भेटिन्छ ।
देश भेटाउने र छाम्ने माध्यम नै राजनीति हो । त्यसैले राजनीतिमा व्यापक धुर्विकरण र शुद्धिकरण अनिवार्य छ । राजनितिमा सक्षम र इमानदार मान्छे नलाग्नु भनेको फेरि उहीँ गलत नितिलाई मान्नु स्विकार्नु हुन्छ । राजनितीमा युवा बर्गको हस्तक्षेप नहुनुले दुर्गन्धित राजनिती सधै यस्तै रहने खतरा बढेर गएको छ ।
त्यसैले, युवा बर्गले अब इमानको राजनीति गर्नु पर्छ, विधि र थितिको राजनिती गर्नु पर्छ । राजनीतिको अर्थ राज्यदोहन नभएर राज्य निर्माण हो भन्ने बुझाई स्थापित गरिनु पर्छ। हाम्रा भन्दैमा राम्रा देख्न हुँदैन । त्यस्तो संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ । अनि बल्ल सुध्रन्छ समाज । सुध्रन्छौं हामी पनि । तसर्थ राजनीति नसुधारिए हामी सुध्रन्नौँ । हामी नसुध्रे राजनीति सुधारिन्न । यहि कुराको मनन गर्न सके केही हुन्थ्यो ।
अब युवाले त्यो राजनिती गर्नु पर्छ जस्लाई देखेर एउटा सामान्य नागरिकले भन्न सकोस वाह ! राजनीति ।
कलेज जाँदै गरेको विद्यार्थीले भन्न सकोस, बा म नि राजनीति गर्छु । त्यसैले सबैले वाह ! राजनीति भन्न लायक राजनीति हुनु पर्यो । अब युवाले हेरेर बस्ने हैन गर्ने बेला आएको छ । त्यसैले छ्या ! राजनीतिलाई वाह ! आहा ! राजनीतिमा बदलने नेतृत्व रोजाँै र आजैदेखि सचेत र राजनीतिलाई सहि परिभाषित गर्न युवा जमात लागौँ ।